साम्राज्ञी आरएल शाहको भाऊ « Naya Page
साम्राज्ञी आरएल शाहको भाऊ
प्रकाशित मिति : 8 November, 2018 1:04 pm
काठमाडौं, २२ कात्तिक । चर्चित अभिनेता अनमोल केसीको जोडी बनेर सिने नगरीमा डेब्यु मारेकी साम्राज्ञी आरएल शाह हटकेक अभिनेत्री हुन् ।
उनलाई लिएर चलचित्र बनाउने धोको धेरै निर्माता निर्देशकको छ । तर, सबैको रहर पूरा हुन सकेको छैन । निर्देशक नवल नेपाल पारिवारिक फिल्म बनाउन माहिर मानिन्छन् । गत वर्ष उनी निर्देशित फिल्म ‘मंगलम’ रिलिज भएको थियो ।
उनले ’लज्जा’, ’भाग् सानी भाग’, ’तस्विर’, ’महसुस’ लगायतका फिल्म पनि निर्देशन गरिसकेका छन् । यस वर्ष उनी नयाँ फिल्म लिएर आउँदैछन् । ‘अझै पनि’ निर्मात्री पुनम गौतमको निर्माण रहने फिल्ममा उनी निर्देशकको रुपमा छन् ।
दीपिकालाई ‘नो’ भनेर साम्राज्ञी रोज्नुको कारण के थियो ? निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘दीपिका जीसँग एक चरण मात्र कुरा भएको हो । मिडियामा उनी अनुबन्धित भएको खबर आउँदा उनले फिल्म साइन गरेकी थिइनन् । मैले चाहिँ निर्मात्री गौतमसँग साम्राज्ञीलाई नै लिनु पर्छ भनेर भनिरहेको थिएँ ।’
स्क्रिप्ट र भूमिका मन परेपछि साम्राज्ञीले फिल्म साइन गरेको उनले बताए । साम्राज्ञी शहरिया युवा युवतीले रुचाएकी अभिनेत्री हुन् । निर्देशक नेपाल पारिवारिक फिल्ममा फिट मानिन्छन् । सहकार्य कस्तो होला ? फिल्म पारिवारिक भए पनि यसपटक आधुनिकिकरणतर्फ जोड दिएको निर्देशक नेपालले बताए ।
सअघि ‘मंगलम’ मा साम्राज्ञीलाई नवलले निर्देशन गरेका थिए । उता, अभिनेत्री साम्राज्ञी फिल्ममा अनुबन्ध भएपछि निर्मात्री पनुमले ढुक्कको सास फेरेकी छन् । अब उनी फिल्मले लगानी उठाउन गाह्राे नहुनेमा विश्वस्त छिन् ।
काठमाडौं, ८ जेठ । फ्रान्सको पेरिसमा भइरहेको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्म मेकर्स मीनबहादुर भामले
काठमाडौं, ८ जेठ । चलचित्र पत्रकार संघको २० औं बार्षिकोत्सवमा नायक भुवन केसीले बक्स अफिसको